PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-17 - Ukusebenza noblack Coffee kumvulele iminyango
Ukusebenza noblack Coffee kumvulele iminyango
Akasiyena umafikizolo kwezomculo
Ilanga langeSonto - 2017-09-17 - Izindaba - THANDI ZONDI
UKUSEBENZA nenkakha emculweni uthi kumvulele iminyango usoulstar osanda kukhipha i-album esihloko sithi, Back To Soul Experience.
“Kube lula ukuba ngazane nabantu emuva kokusebenza noblack Coffee engomeni ethi, You Rock My World nokusebenza ngaphansi kwakhe kunginike ulwazi olunzulu emculweni we-house,” kuchaza yena.
Usoulstar akasiye umafikizolo kwezomculo njengoba phambilini eke wakhipha i-album ye-gospel, wenza icompilation ye-house waphinde wangena nakwi-r&b. “Ayikho inhlobo yomculo engingayazi, ngikhule ekhaya ngilalela iblack Mambazo.
"Nokuyinto eyenze kwalula ukuba ngikwazi ukuba ngingene ezinhlotsheni zomculo ezahlukene,” esho.
Igama elithi Soulstar uthi liqhamuke ngenxa yokuba ngu- mlandeli kamusiq Soulchild. Wagcina ekhethe ukuba azibize ngesihloko senye yezingoma zakhe. Uthi izi-ngoma ezikwi-albhamu yakhe zi-mnandi zonke kunzima ukuthi aphume neyodwa acabanga ukuba izothandwa ngabalandeli.
“Ngisebenze nabaculi abacula izinhlobo ezahlukene zomculo ngoba bengifuna olalele kungabi sengathi ulalele ingoma eyodwa. Kubalulekile ukuthi ingoma ngayinye ikuhlabe umxhwele uma uyilalele ukuze ungasitholi isikhathi sokweqa izingoma,” kuqhuba usoulstar. Uthi akagcinile ngale albhamu kukhulu eza nakho njengoba kukhona akuphekayo nombuso Khoza nomondli Ngcobo. “Abantu mabalindele lukhulu, ngingumuntu wamathalente amaningi uma kuza emculweni. Ngiyazifela ngomculo nokusho ukuthi ngokuzayo ungathola i-albhamu yami yehlukile kulokhu okuzwa kule engiyikhiphile”.
Uthi ngokuzayo unesifiso sokusebenza namaciko asenhla neAfrika afana nodavido, uwizkid notiwa Savage. “Ngikholwa wukuthi sekuyisikhathi sethu njengamaAfrika ukuba sisebenze ndawonye ngoba sekubonakele ukuthi siyakwazi ukuba senze izinto zenzeke,” kusho usoulstar. Uvelaphi Mthimkhulu okuyigama lakhe langempela useke wasebenza noHeavy K, uvinny Da Vinci, UDJ Christos, ushota,ulira, ushimza, unhlanhla Nciza, uculoe De Song nabanye. tzondi@ilanganews.co.za
Ngisebenze nabaculi abacula izinhlobo ezahlukene zomculo...
NGUSOULSTAR osanda kukhipha i-album esihloko sithi, Back To Soul.